Cristiano Ronaldo wuu ciyaari karaa ilaa uu ka gaaro 40 sano waa kuma shaqsiga sidaas yiri.
Home Horyaalka Italy Cristiano Ronaldo wuu ciyaari karaa ilaa uu ka gaaro 40 sano waa...
Xogtu been ma sheegto, Ronaldo waa ugaarsiga ugu wanaagsan qarniga 21aad. Da’da caqabad kuma ahan xiddigga Juventus.
Dhakhtarka Ripoll oo caan ku ah adduunka kubada cagta ayaa ra’yigiisa ka dhiibtay qaab dhismeedka Ronaldo Da’diisa bayoolojiga ayaa aad uga hooseysa haatan 36 sano Waxaan u maleynayaa inuu ciyaari karo ilaa uu 40 jirsado
Ripoll wuxuu qabaa in Ronaldo uu soo fiicnaaday madaama sanadihii lasoo dhaafay uu sameeyay isbadal aad u caqli badan oo ku saabsan jirkiisa qaabkiisa ciyaarta iyo dhaqdhaqaaqyadiisa sanadihii la soo dhaafay wuxuu aad ugu xoogan yahay awoodiisa jirka iyo xawaaraha ka dibna wuxuu u dhaqaaqay qaab si wanaagsan u tababaran oo qaab wanaagsan u abaabulan.
Shakhsiyanimadiisa ayaa ka caawisay inuu wax badan ku kobco xirfad ahaan, sida uu sheegay dhakhtarku. Cristiano, waxaan ku muujin lahaa rabitaankiisa ah inuu guuleysto. Waligiis kuma qanacsana oo wax badan ayuu naftiisa u baahan yahay. Ka baxsan hiddo-wadaha, maskaxdu waa furaha noqoshada horyaal. Taasi waa aasaaska ka dibna waxaa jira sirdoon karti lagu fahmo xaqiiqada, in la ogaado in xaaladahaaga jir ahaaneed ay is beddelayaan oo ay la qabsan karaan, iyaga oo inta ugu badan sameeya.
Waxa kale oo uu shaaca ka qaaday sababta dhaawacyadu had iyo jeer u ixtiraamaan Cristiano: “Waa nin aad u dabacsan. Sidoo kale, anecdote ahaan, waxaan ula dhaqmay goolhaye kaasoo kubada ku xayiran, isku dayay inuu gacantiisa ku joojiyo Ronaldo, qaab saaxiibtinimo ah, oo garbihiisa kala baxay. Taasi waa awoodiisa ”, ayuu yidhi.
Saaxiibkiisii hore ee United, Ricardo López, ayaa sidoo kale u arka inuu ciyaarayo mustaqbalka fog: “Marka la eego farsamada, xoogga jirka, maskaxda wuu ciyaari karaa ilaa uu maskaxdiisa ka dhigo Wuxuu ka dhigaa kuwa isaga ku xiga inay ka sii fiicnaadaanbWuxuu jabiyay diiwaannada taariiqda iyo kuwa hadhay. Taariikhda ayuu galay. Waa lambar koowaad.
Previous articleIsku aadka Semi finalka Copa del rey oo la sameyeey.
Next articleChelsea oo isha ku heysa saxiixa xiddiga Real Madrid